50,000 Jamaica Tourism Vashandi Kudzoka paJobho Mumwedzi 6 Yekupedzisira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » 50,000 Jamaica Tourism Vashandi Kudzoka paJobho Mumwedzi 6 Yekupedzisira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Jamaica Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett (2th kuruboshwe) sampu yekotapeya yakasanganiswa ice cream kubva kuKande's Delights seye CEO wekambani, Kevin Dean (kurudyi), akatarisa. Vachagovana panguva ino ndiMunyori Permanent Secretary, VaJennifer Griffith (kuruboshwe) naRichard Pandohie, Sachigaro weKufekita Kwekugadzira technical Working Group, Tourism Linkages Council. Chiitiko ichi chaive kushanya kwezviratidzwa paChitatu cheKisimusi muna Chikunguru chakaitwa nezuro (Chikunguru 7) kuJamaica Pegasus Hotel, New Kingston.
Jamaica indasitiri yekushanya yakadzosa vashandi vanopfuura zviuru makumi mashanu mumwedzi mitanhatu yekupedzisira, ichiratidza kugona kwayo kusimba uye kugona kwayo kudzoka kubva kumatambudziko.
PaChristmas yezuro munaChikunguru yekutengesa, Gurukota rezveKushanya rakazivisa nhau nezvekuwedzera kushanda munyika.
Akataura zvakare kuti vangangoita mazana manomwe ezviuru evashanyi vakamira mumwedzi mishanu yapfuura.
Jamaica Tourism iri kufungidzira kuti ichasvika vanosvika miriyoni imwe nevashanyi uye vanofamba kupera kwaNyamavhuvhu.
Gurukota rezveKushanya, Hon. Edmund Bartlett, akataura chiziviso nezuro (Chikunguru 22) pachikamu chechinomwe che "Kisimusi muna Chikunguru" ratidziro yekutengesa kuJamaica Pegasus Hotel, New Kingston. Chirongwa chegore rino chinokurudzira kutengwa kwezvigadzirwa zvemuno zvevatsigiri mubazi rezvekushanya nekambani yeJamaica vachitsvaga zvipo kune vatengi nevashandi.
“Zvakare, mumwedzi minomwe yapfuura, taunza vashanyi vanosvika mazana manomwe ezviuru (kumira) uye, kupera kwaNyamavhuvhu, tinofungidzirwa kuti tisvike miriyoni nevashanyi vanouya Jamaika, iyo ichaunza kumwe kunhu munzvimbo yeUS $ 1.5 bhiriyoni muhupfumi hwenharaunda. Hapana imwe indasitiri yaigona kudaro mumwedzi minomwe; indasitiri yezvekushanya ine, ”Gurukota Bartlett vakaudza vateereri vemumiriri, vane chekuita nekushanya pamwe nevamiriri vemakambani eJamaica.
Vachitaura nezvekuvaka nzvimbo kune vanotengesa vemuno, Gurukota Bartlett vakati: “Sezvatinopora, tinofanirwa kupora pamwe chete uyezve kuwana simba. Tinofanira kudzorera zvakanyanya kurasikirwa kwataive nako denda risati rasvika nekuti pasati pava nedenda takava nemamiriro ekudonha kwemadhora ekuUS kubva mumaindasitiri emasendi makumi matanhatu. Takanga tasvika pamwero wekuchengetwa kwemasendi makumi mana. ”
Gurukota rezvekushanya rakadaro Jamaica inofanira kufamba vanodarika masendi makumi mana kusvika pamasendi makumi mashanu ekuchengetedza, vachiona kuti "denda ratipa mukana uyu nekuti tiri kutanga kubva pavhu zero kuti tikwanise kupora pamwechete."